Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेपाल भारतकाे ‘ए’ टिमसँग ८ विकेटले पराजित – Emountain TV
नेपाल भारतकाे ‘ए’ टिमसँग ८ विकेटले पराजित
काठमाडौं, २९ भदौ । भारत र अफगानस्तान सम्मिलीत यू–१९ क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो हार व्यहोरेको छ । शुक्रबार भारतको लखनउमा भएको खेलमा भारतको ए टिमसँग ८ विकेटले पराजित हुँदै नेपालले लगातार दोस्रो हार व्यहोरेको हो ।
इकाना अन्तर्राराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले ४५ ओभर ५ बलमा १ सय ६५ रनमा अलआउट भयो । नेपालका तीनजना खेलाडीले मात्रै दोहोरो रन बनाए । जसमा सन्दिप जोराले ६६, त्रितराज दासले ४६ र भिम शार्कीले २८ रन बनाएका थिए । १ सय ४२ रनमा ६ विकेट खेर फालेको नेपालले अरु १४ रन थप्दा अल आउट हुन पुग्यो ।
जवाफमा उत्रेको भारतले २४ ओभर १ बलमा २ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य हासिल गर्‍यो । भारतका लागि अनुज रावतले ४७ रन बनाए भने वाइभी राथोडले ५९ र प्रभासिमरन सिंहले ४६ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका पवन सराफ र कमलसिंह ऐरीले एकएक विकेट लिएका थिए ।
नेपाल पहिलो खेलमा भारतको बी टिमसँग ४० रनले पराजित भएको थियो ।